असाधारण व्यक्तिहरू केवल एक असाधारण MOBA हो Androidsis
एक सम्पूर्ण आगमन कि असाधारण को ओन्स, Netease बाट MOBA कि प्रस्थान पूर्वानुमान गर्न चाहन्छ दंगा खेलहरू द्वारा लिग अफ लिजेन्ड्सबाट र यसैले टेबुलमा ठूलो मुक्का दिनुहोस् र आफैंलाई महसुस गराउनुहोस्। र सत्य यो हो कि यो एक राम्रो तरिकाले गर्न नसकिने थियो, किनकि हामी सामना गर्दैछौं जुन वर्षको एक अनलाइन खेलहरू मध्ये एक हुने छ।
तिनीहरू डरले काम्न जान दिनुहोस् अनलाइन मल्टिप्लेयरका राजाहरू, र हामी PUBG मोबाइल र फोर्टनाइटको बारेमा पनि कुरा गर्छौं, किनभने यी प्रकारका खेलहरू लाखौंको ध्यान आकर्षण गर्न सक्षम छन्। र सबै भन्दा माथि महान गुणको लागि जुन यस खेलको खजाना हो र त्यो सबै पक्षमा ओभरफ्लो हुन्छ। यो मोबालाई बिट दिनुहोस् जुन fable जस्तै देखिन्छ।
1 केवल असाधारण
2 56 XNUMX भन्दा बढी नायकहरू एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओन्समा तपाईंको पर्खिरहेका छन्
3 प्राविधिक र नेत्रहीन रूपमा यो दृश्य हो
हामीले वास्तविक MOBA हराइरहेका छौं (जुन हामी चाहँदैनौं अवस्थितहरूलाई तुच्छ ठान्नुहोस्, तर यो के हो यो) यो अनौंठो व्यक्तिहरूको जस्तै र यसले लीग अफ द लिजेन्ड्स वा DOTA जस्ता शीर्षकहरूको गेमप्ले अनुकरण गर्दछ। र सत्य यो हो कि पहिलो क्षण बाट एक महान सम्बन्ध जाली हुन शुरू हुन्छ, जुन हामी नेतृत्व गर्न जाँदैछौं यो नयाँ MOBA को साथ।
र हामीले भनेका छौं कि PUBG मोबाइल र फोर्टनाइट एक तथ्यको लागि कम्पित छन्: एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओन्सको खेलहरू ती न त छोटो छ न लामो, र तिनीहरू १०-१-10 मिनेटमा बस्छन्। हामी यो भन्छौं किनकि यो त्यस खेलाडीका लागि उत्तम खेल हो जुनसँग उसको जीवन, उसको कामहरू र अधिक चीजहरू छन् र त्यस क्षणको सर्वश्रेष्ठ अनलाइन खेलहरू छोड्न चाहँदैनन्; र यो दुबैको बिरूद्ध जान्छ कि PUBG को क्लासिक मोडमा कसैले पनि प्रति खेल minutes० मिनेट लिन सक्दैन, र यदि तपाइँले दुई वा बढी लिनुभयो भने ...
असाधारण व्यक्तिहरूमा फर्कदै हामी छौं एक धेरै विस्तृत नक्साको साथ एक 5V5 MOBA अगाडि, अधिक पारम्परिक MOBAS साथ र यो एक राम्रो काम छ तपाईं जेसुकै हेर्नुहोला पनि। यदि हामी यसमा थप्दछौं कि नेटिआज क्लासिक हुँदैछ, र यसले हिमालयनको हातमा डियाब्लो अमर हात विकास गरिरहेको छ भने, हामीसँग फाउन्डेशनको साथ पहिले नै एक खेल छ जुन यस बर्षको सर्वश्रेष्ठ हो।
56 XNUMX भन्दा बढी नायकहरू एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओन्समा तपाईंको पर्खिरहेका छन्
LOL जस्तै, असाधारण व्यक्तिहरूमा तपाईं नयाँ नायकहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ जुन तपाईंलाई हुन अनुमति दिँदछ एक हत्यारा, समर्थन, ट्या tank्क वा एक वास्तविक DPS। यदि हामीसँग पहिले नै विश्‍व प्रक्षेपणको साथ श्रृंखलाहरूको महान विविधता छ भने, म नयाँ अपडेटहरू कहिले आउँछ भनेर कल्पना गर्न पनि चाहन्न।
गेमप्ले धेरै चिनिन्छ, र हामीले गर्नु पर्छ टावरहरू जित्न जानुहोस् दुश्मनलाई हटाउन को लागी उसले पनि त्यसो गर्न कोशिस गर्नेछ। कुरा अन्तिम टावरमा पुग्न र यसलाई हटाउन सक्षम हुनु हो। तर यसका लागि हामीले शत्रुको भीड र हामीले सामना गर्ने तीव्र लडाईहरूको सामना गर्नुपर्नेछ।
अहिलेसम्म हामीले याद गरेका छैनौं प्रदर्शन को अभाव को एक Iota हैन, जसले तपाईंलाई पहिले नै एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओन्स कहाँ जाँदैछ हेर्न अनुमति दिन्छ। हामी उल्लेख गरिएको अन्य अनलाइन खेलहरूमा थाहा पाएका कस्मेटिक वस्तुहरूको साथ सबै फ्रिमियम थप्न सक्दछौं र त्यसले अन्तिम स्पर्शलाई गोल एमओबीए भन्दा बढी बनाउँदछ।
प्राविधिक र नेत्रहीन रूपमा यो दृश्य हो
त्यसो भए हामी पनि बस्छौं यसको सेल शेडिंग दृश्य सौंदर्यको साथ प्रेममा र यो पूर्ण पनि छैन। आज मोबाईलमा पुग्न भिजुअल क्वालिटी अविश्वसनीय छ र हामी भन्न सक्दछौं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओन्सले एक कदम अगाडि लिन्छ, फोर्टनाइट वा PUBG मोबाइल जस्ता शीर्षकहरू गटरमा थोरै छोडिन्छ। र त्यो दृश्य गुणवत्ता पनि खेलमा लगिन्छ।
र त्यहि हो जहाँ कडा पोइन्ट हुनु पर्छ धेरै गतिशील, धेरै सफा एनिमेसनहरू र दृश्य प्रभावहरूको एक पूरै श्रृंखला ताकि हाम्रो स्क्रीन रोशनीको एक शो बन्न। हामी धेरै होशियारीले MOBA मा छौं र किनकि यो क्षेत्रीय रूपमा रिलीज भएको छ, यो फर्मको ठूलो राज्यमा अन्तिम संस्करणमा पुग्छ। अद्यावधिकहरूको लागि अब कुर्नुहोस्।
यदि तपाईं द्रुत अनलाइन मल्टिप्लेयर खेलहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंसँग आजaछ असाधारणको साथ महान खेल, एक MOBA कि लिजेन्ड्स अफ लिगका लागि यसले चीजहरू धेरै गाह्रो बनाउँदछ। यो सबैमा निर्भर गर्दछ यसले दंगा खेलहरू मार्केटमा यसको खेल सुरू गर्न कत्ति समय लिन्छ। अहिलेको लागि, विटिएट गर्न!
ग्राफिक र प्राविधिक स्तरमा उत्कृष्ट
खेलहरू जुन अन्य खेलाडीहरू विरुद्ध संलग्न छन्
यो मोबा भनेको के हो
हामीलाई सेल शेडिंगको प्रयोग मन पर्छ
अझै कुनै स्पेनिश छैन
असाधारण व्यक्तिहरू: 5V5 MOBA
विकासकर्ता: HK हीरो उद्यम कं, सीमित
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड खेलहरू » असाधारण अनस, Netease बाट MOBA, एन्ड्रोइड आउँछ आफूलाई वर्ष को एक अनलाइन को रूप मा स्थिति।
म एक ठूलो खेल खेल्छु, म यसको सिफारिश गर्दछु, मैले धेरै मोबसको प्रयास गरेको छु र म यहाँ बस्छु।
साइमनलाई जवाफ दिनुहोस्
सत्य यो छ कि यो धेरै राम्रो छ!
म यस समयमा बृहस्पतिसँग छु, र यदि तपाईंले टाढाबाट राम्रोसँग ह्यान्डल गर्नुभयो भने, यो शक्तिशाली छ। यो अधिक अक्षरहरूको परीक्षणमा जान्छ। आशा छिटै थप नक्शा छिट्टै थपिने छ।